Siyaasada Asturnaanta - St.Louis, MO
Mid kasta oo ka mid ah Kiosk waxaa lagu qalabeeyaa hal ama dhowr kamaradood. Kaamiradu waxay qabataa sawirada aagga ku wareegsan Kiosk, sawiradana waxaa ku jiri kara adiga. Ma xafideyno wax sawir ah kamarada qabatay muddo ka badan 15 maalmood, haddii aan sawirku muhiim yahay si loo baadho dhacdo dhacday ma ahayne. Waxan doporan karnaa inaan muuqaal kaamiro la wadaagno dawlada hoose si loo dhawro amaanka dadwaynaha, hase yeeshee, ma isticmaali doonno haddii kale ama u bixinayno macluumaadka ay soo ururiyeen kamaradaheena marka laga reebo hagaajinta howlaha iyo hubinta amniga Kiosk ama hadday lagama maarmaan noqoto si wax looga qabto hawlaha sharci darrada ah, la xirriirta ama lagu sameeyo Kiosk yada ama aaga ku xeeran. Ma adeegsan doono qalabka aqoonsada wajiga qofka.